Masuuliyiin Xisbiga Waddani Ka Tirsan Oo Madaxweyne Xigeenka Ku Booriyay Inuu Iscasilo |
Masuuliyiin Xisbiga Waddani Ka Tirsan Oo Madaxweyne Xigeenka Ku Booriyay Inuu Iscasilo
Hargeysa(GNN)kuxigeenka guddoomiyaha Waddani, Axmed Muumin Seed, ayaa sheegay inaanu garanayn sababta Madaxweyne xigeenku kursiga ugu sii fadhiyo maadaama la ixtiraami waayay go’aammada uu ka gaadho arrimaha madaxweynuhu u xilsaaro. Waxa uu sheegay in wasiiro awood sheeganayaa talada ka maroorsadeen.
Hadalka Guddoomiye xigeenka Waddani, ayaa imanaya iyadoo ay isa soo tarayaan warar ku saabsan khilaaf cakiran oo u dhexeeya Madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa islamarkaana Madaxweyne xigeen Cabdiraxmaan Saylici ku hanjabay inuu iscasilayo.
Mudane Seed, waxa uu xukumadda ku eedeeyay inay masuul ka tahay khilaafaad ku soo noqnoqday Jaamacadda Hargeysa 5-tii sanno ee ay xilka haysay.
“Runtii Shantii Sannadood ee xukumadda Siilaanyo xilka haysay jaamacadda Hargeysa waxaa ku jiray khilaaf. Waxay shacbiga Somaliland ka dheregsan yihiin in Madaxweyne xigeenku dhabar ka ku qaatay inuu xalliyo khilaafka Jaamacadda, waxaase runtii Nasiib darro ah, in go’aankii madaxweyne xigeenku shaqayn waayay oo wasiiro tiro yar oo awood badan sheeganayaa khilaafeen go’aankii madaxweyne xigeenka, taasina ay tahay nasiib darro haysata xukumadda maanta jirta,” ayuu yidhi Axmed Muumin Seed.
Guddoomiye xigeenka Waddani, waxa uu ku booriyay Madaxweyne xigeenka inuu xilka iskaga tago maadaama aan go’aammadiisu soconayn “Khilaafka jaamacaddu wuu joogsan waayay, go’aankii madaxweyne xigeenkuna wuu socon waayay. Dastuuriyan dalka waxaa la doortay Madaxweyne iyo kuxigeen laakiin, waxaa wax lala yaabo ah talo kasta oo madaxweyne xigeenku cid la saxeexdo go’aankiisu ma soconayo. Waa nasiib darro madaxweyne xigeenka gaar u haysata, Waayo? Go’aankii anaga saddexdayada xisbi qaran uu nala qaatay wuu socon waayay, go’aankii khilaafaadka jaamacaddu wuu socon waayay. Anigu ma garanayo xilka Madaxweyne xigeenku ku sii jeclaysanayo inuu kursiga ku sii fadhiyo maadaama ay go’aammadiisii socon la’yihiin, anigu taas ma garanayo” ayuu yidhi Mr Seed.
Shalay ayay sidoo kale Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoog iyo Xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire, sheegeen inuu jiro khilaaf Cakiran oo labada masuul ee dalka u sareeya u dhexeeya balse Mudane Saylici yahay Mid kolba la diido go’aamadiisa.
“Saylici muddo dheer buu kolba du’dayay oo kolba ka cararayay meesha(Madaxtooyada), haddana kama tago. Meesha kama tage waxna kama tare weeye. Waa ninka intuu gogol dhigay oo wax nala saxeexday haddana yidhi xaggii madaxtooyada ayaa laga diiday. Waxaan odhan lahaa waar illayn Madaxweyne xigeen baad tahay awoodahaaga dastuurku ku siiyay isticmaal amma si cad isku casil oo iskaga tag meesha” ayuu yidhi Xildhibaan Xoog.
Xildhibaan Naasir ayaa isna yidhi “Qaranka Somaliland waa la ogyahay in madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka khilaaf ka dhex jiro, haddii taasi sii socotana qaranka ayaa halis ku jira. Haddii meesha khilaaf yimaado dee wada shaqayntii iyo dantii qaranku meesha way ku burburayaan”
Dastuurka Somaliland oo diciifiyay awoodaha Madaxweyne xigeenka ayaa qodobka 91-aad ee dastuurka farqaddiisa 2-aad sheegaysaa in madaxweyne xigeenka awoodihiisa ay ka mid tahay “Gudashada hawlaha madaxweynuhu u Igmado”, hase ahaatee waxaa muuqata in heshiika Khilaafka jaamacadda iyo heshiiska Asxaabta ee Madaxweyne xigeenku go’aammada ka gaadhay socon waayeen, isagoo igmasho rasmi ah ka haysta madaxweynaha.
Gabileynews network office